पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग कांग्रेस नेता प्रकाशमानको कसरी भयो यस्तो जम्काभेट ? — Imandarmedia.com
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग कांग्रेस नेता प्रकाशमानको कसरी भयो यस्तो जम्काभेट ?
काठमाडौं । आइतवार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जम्काभेट भएको छ। अाइतबार साँझ होटल सोल्टीमा आयोजित एक पास्नी कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका दुवै जनाबीच पूर्वनिर्धारित योजना बिना नै अकस्मात् भेट भएको हो।
पास्नीको निम्तो मानेर फर्किएका पूर्व राजासँग कांग्रेस नेता सिंहको भेट भएको थियो। फर्किँदै गर्दा लबीमा करिब एक मिनेट वार्ता भएको बताइएको छ। वार्तामा उनिहरुले सामान्य भलाकुसारी मात्र गरे वा अरु केही छलफल भयो भन्नेबारे केहि बताइएको छैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रकाशमान सिंहले भेटेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यापक आलोचना र टिका टिप्पणी भएका छन् । यसरी विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी हुन थालेपछि उनको सचिवालयले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको छ ।
अकस्मातको भेटलाई अनावश्यक रुपमा उचालिएको सिंहका सहयागी नेविसंघ नेता युपी लामिछानेले बताए। आकस्मिकरुपमा भएको भेटमा नमस्कार आदान-प्रदान मात्रै भएको दाबी उनले गरेका छन् ।